Column Archives - NDỊ IGBO KWENU
June 9, 2016	Ala Igbo, Column, Featured 0
Ọbụghị iwu na anyị na ndị asụsụ ọzọ ga ebi. Ọbụghị iwu na ndị asụsụ ọzọ ga anabata anyị n’Ala ha. Ọbụghị iwu na ha ga-ahụ anyị n’anya. Ọbụghị iwu na ha ga esoro anyị dozie Obodo ka ọ dị nma. Ọbụghị iwu na anyị ga edoziriri Ala ha tupu ...
May 10, 2016	akwụkwọ 1
May 6, 2016	Ala Igbo, Column, Featured 0
Ị hụ nwanne gị n’ụzọ, kele ya ka ụmụigbo si ekele. Kele ya n’olu igbo, too ya afa ka ụmụigbo si eme. Kwalie ya ọtọ n’etiti ndị ọzọ ka ha maara na ọ bụ onye pụrụ iche. Ọnwere ihe kpatara ndị nna nna anyị ha ji etu onwe ha afa ma ...
April 11, 2016	Column, Featured 0
Okwu ana-asọ anya anaghị ebi gboo… Gịnị kpatara alụm nwayị ji buzie ije ụbịam kita? Mmemme Ije nke mbụ (1st visit party) Mmemme Ije nke abụọ (2nd visit part) Mmemme Ije nke atọ (3rd visit party) Igba nkwụ (Trditional Marriage) Agbam akwụkwọ nke ụka (church wedding) Agbam akwụkwọ nke ụlọ ...